Ukuphonononga iNtsingiselo yeBhali eBhali ebomvu kunye neMpawu - Ukufa Kwinkcubeko Kumhlaba I Ihlabathi
Ukuphonononga iNtsingiselo yeBhali eBhali ebomvu kunye neMpawu
Ibhayibhile izele luphawu olutyebileyo olunceda ekuchazeni ngcono inyani yokomoya ngokuyithelekisa nezimo eziqhelekileyo zomhlaba. Kudala iintaka ziboniswa njengezibalulekileyo ngokomoya. Ngaba ikhadinali ebomvu ibambe intsingiselo nokubaluleka kwebhayibhile? Eli nqaku liza kukunceda uqonde izithethe kunye nokutolika ngokomoya malunga nobukho beekhadinali.
Amasiko kunye neMpawu
Imbali yakudala igcina inkolelo yokuba 'Xa ukhadinali evela eyadini yakho, lundwendwe oluvela ezulwini.' Amakhadinali abeluphawu lobukho bokukhanya phakathi kobumnyama, ithemba phakathi komlotha wosizi, kunye nokufudumala kobusika obubandayo. Isaci esithi, 'Iikhadinali zivela xa iingelosi zikufuphi' sithatha ithemba kwimbonakalo yobuhle nokuphakama kwesidalwa sendiza. Ezinye zeenkcubeko malunga nentsingiselo yobukho bekhadinali zezi:
Ikhadinali ebomvu ngumthunywa womoya ovela kuThixo.
Ikhadinali ebomvu imele omnye wabathandekayo abaswelekileyo abazama ukunxibelelana naye.
Xa ikhadinali ebomvu ibetha ifestile, ayilungangauphawu olumele ukufa.
Ikhadinali ebomvu ibonisa igazi likaKristu.
Ifuzisela ukulwa ubunzima nethemba kuThixo, ikhadinali ebomvu ibonakala ngamaxesha oxinzelelo kunye nokuphelelwa lithemba ukukhuthaza ithemba nokuzingisa.
Zeziphi iintaka eziluphawu lokufa?
Umfuziselo wehobe elililayo: Ukujonga uxolo lwawo kunye namandla
Ukubaluleka kweebhabhathane kuManyano lokufa
Ikhadinali ebomvu yentsingiselo yebhayibhile
Nangona uluvo oluqhelekileyo kukuba ubukho bekhadinali ebomvu bubonisa uThixo okanye umthunywa ovela kuThixo, igama elithi khadinali alisetyenziswanga ngqo eBhayibhileni. Iikhadinali aziveli kummandla weMeditera, indawo ekusetyenzelwa kuyo uninzi lweencwadi zeSibhalo.
Ngaba uThixo uthumela iintaka njengomqondiso?
Alithandabuzeki elokuba uThixo usebenzise izilwanyana kunye neentaka kuyo yonke iBhayibhile njengemiqondiso yobukho bakhe okanye ukutsalela umyalezo wakhe. UThixo wasebenzisa iinkozi, amahobe, oongqatyana, amahlungulu nezinye iintaka ukubonisa uthando Lwakhe nokukhathalela abantu, ngakumbi isizwe sakwaSirayeli. Eminye imizekelo ibandakanya:
IGenesis 8:11 'Ihobe labuyela kuNowa ngokuhlwa.'
Iindumiso 50:11 'ndiyazi zonke iintaka ezintabeni.'
U-Isaya 40:31 'Abo balindela kuYehova baya kunyuka ngamaphiko njengeenkozi.'
ULuka 12: 24 'Qondani ngamahlungulu la: akahlwayeli yaye akavuni.'
UMateyu 10:16 'Yibani nobuqili njengeenyoka, nibe msulwa njengamahobe.'
UMateyu 23:37 'Ndinqwenele ukuqokelela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukukazi sihlanganisa amantshontsho aso.'
Abanye abafundisi bezakwalizwi babona ikhadinali ebonakalisa uMoya oyiNgcwele, edibanisa into yomlilo yomsebenzi kaMoya kunye namandla kunye nobomi obufumaneka kuMoya. Uboshwe ligazi likaKristu, uKhadinali umele ubomi obungunaphakade bukaYesu nobufundisi baKhe. Nangona kungenjalo ngokukodwa i-cardinal, zonke iincwadi zeVangeli eBhayibhileni zibonisa uMoya njengehobe ehla evela emazulwini ukuza kuYesu.
Nangona kukho ukungavumelani malunga ngqo nemvelaphi yeli gama, isithethe sithi abantu bokuqala eRoma ukubizwa ngeekhadiyali yayingamadikoni avela kwiingingqi ezisixhenxe zedolophu. Ukusetyenziswa kudibanise ezi nkokeli zecawa ngegama elithi 'inqununu' okanye 'ophakamileyo.'
yimalini inkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala ukuba nobunzima
Umbala obomvu wekhadinali unxulunyaniswe negazi likaKristu eliphilayo. Amakhadinali abonwa njengophawu lobungqabavu. Kwimeko yobuKristu, igazi likaKristu liyintliziyo yesigidimi salo kwaye amandla akhe ahlala ngonaphakade. 'UKristu wancama igazi lobomi bakhe ukuze asikhulule, okuthetha ukuba izono zethu zixolelwe ngoku' (Kwabase-Efese 1: 7 CEV).
IKhadinali: Oobhishophu eCaweni
Ngenkulungwane yesithandathu, igama lekhadinali lalinikwa umbingeleli omkhulu kwicawa nganye yaseRoma owayengamiselwanga kwicawa ethile. Ngo-769 yayinguKhadinali kuphela owayefanelekile ukuba abe nguBhishophu waseRoma (uPopu), kwaye ngo-1244 amaKhadinali anikwa ilungelo lokuthwala umnqwazi obomvu.
Igama lekhadinali livela kwingcambu yesiLatin 'cardo' ethetha ihinge. Njengehenjisi emnyango, ikhadinali ibonwa njengendawo yokudibanisa phakathi kwezulu nomhlaba, ivumela imiyalezo ngapha nangapha. Kuba ihinge sisixhobo umnyango onokuthi usebenze kuso, 'i-cardo' yathetha ukuba 'yinto apho ujika ujikeleze khona' kwaye 'yinto ebaluleke kakhulu.'
Ikhadinali ebomvu yoBungqina boMoya
Amasiko amaninzi ancamathela kwinqanaba lokubaluleka kokomoya okanye okomfuziselo kwiikhadinali. Ukubona ikhadinali kubomi bokwenyani okanye ukuphupha ngabo kunokuthatha imiyalezo eyahlukeneyo.
Iingcali ze-Ornithologists, abo bafunda indlela yokuziphatha kunye nokuma kweentaka kunye neendawo zeentaka, baye baqaphela ukuba xa ukhadinali efumana iqabane, bahlala kunye ubomi babo bonke. Ubudlelwane babo obuzinzileyo babonakalisa uthando kunye nothando olunothando kwiinkcubeko ezininzi. Kukho izizwe zaseMelika zaseMelika ezikholelwa ukuba umntu ongatshatanga ubala ikhadinali, oko kuthetha ukuba kungekudala baya kuqala ubudlelwane obutsha.
Amanye amaMerika Omthonyama akholelwa kwelokuba amakhadinali ngabathunywa abavela kwimimoya yabafileyo. Kananjalo, ikhadinali inonxibelelwano olomeleleyo nookhokho. Ukubonakala kwayo kukhuthaza ukubaluleka kokuhlala unxibelelana phakathi kosapho. Ezinye iinkcubeko zamkela ikhadinali njengezilwanyana ze totem. Endaweni yokufuduka, uKhadinali uhlala ekhaya ngeenyanga ezinzima zasebusika.
Ithamsanqa, ithamsanqa kunye namaphupha
Ezinye iinkcubeko zitolika ubukho bekhadinali njengezinto ezintle zobuhle. Ke ngoko babona ikhadinali njengophawu lokuza kwethamsanqa. Aphuphamalunga nekhadinali kunokuba ngumqondiso wokuba umntu othile uyakukhuthaza ukuba ulandele amaphupha akho, ukuthanda kwakho kunye nezicwangciso zakho zekamva.
Abanye bekhadinali baxhokonxa unxibelelwano phakathi kokubomvu kwayo kunye nokubonakala kwephoenix kwiintsomi zamaGrike. Iintsomi ezivela kummandla wase-Aleksandriya wase-Egypt babephethe ezabo izithethe zekhadinali efana ne-phoenix. Amakhadinali abonisa amandla kunye nokuzalwa kwakhona kwe-phoenix. Abantu bayayisebenzisa imigaqo njengophawu lokuba umntu uza kuvuka kwimililo yesiphithiphithi kunye nengxaki ukuze abe namandla kwaye oyise.
Imiyalezo evela emazulwini
UThixo unembali yokuthumela imiyalezo kubantu baKhe. Iintaka zihlala zikholelwa ukuba ziimpawu zemiyalezo yokomoya edibanisa izulu nomhlaba. Ngelixa intsingiselo yebhayibhile ebomvu inokuba bubuxoki, ubukho bekhadinali buvuselela abantu kwiimvakalelo zobomi, ukubuyiselwa, ukunxibelelana kunye nethemba. Isithethe esingqonge ikhadinali sisityebi kwaye siyahlonitshwa kwimbali, sikhomba kwindawo yentlanganiso phakathi kwehlabathi elibonakalayo nelokomoya. Awuyi kuba wedwa xa ucinga kwaye ucamngca ngomyalezo ovela ngaphaya xa ubona ikhadinali.
Iifayile Zesan Francisco Izithuthi Iingcebiso Kwikissing Isikolo Ukhuseleko Uphando Neendlela Herbal Unyango
Iindidi E Yoga
Iimpawu zokuba uyakuthanda
ndingazinikela phi iiglasi zamehlo ezisetyenzisiweyo kufutshane nam
Ucoceka njani umgangatho weshawa owenziwe ngombala we-fiberglass
Yimalini ukutya kwebuffet yeendwendwe ezingama-50
I-13 yr ubudala ubudala izimvo zepati
ulumkile kunomdlalo webhodi webanga lesi-5